Wabiga Isis ayaa ku fidsan dunida oo dhan. Dunida adduunkuna waa dharka muuqda ee nafta iyo matalaadda labadaba jinsiga ka soo horjeeda.
Vol. 6 OCTOBER, 1907. No. 1
Xuquuqda, 1907, by HW PERCIVAL.
ISIS ayaa la sheegay in ay ahayd gabar walaasheed ah-hooyadeed. Waxaa loogu yeeray boqoradda samada, noolaha nolosha, hooyada dhammaanba noolasha iyo bixiyaha iyo dib u soo celiyaha foomamka.
Isis waxaa loo yaqaan magacyo kale oo caalami ah oo ay caabudi jireen bani-aadminimada muddadii hore ee dalka Masar. Dhammaan safafyada iyo fasalada waxay isku mid ahaayeen cibaadaystayaasha Isis. Addoonku wuxuu ku hoos jiraa dhuunta, oo shabakad noloshiisa si joogta ah u lumisay nolol maalmeedkiisa dhagxaanta haramka; quruxdeeda caan ka ah, oo nolosheedu ahayd riyo raaxo ah oo raaxo leh oo ay ku jiraan muusikada jilicsan iyo ubaxyo udgoon, lagu maydhay cadarad iyo duufaan leh hawo qallafsan, oo dareen kasta oo lagu kiciyay farshaxanka iyo jilicsanaanta jinsiyadda iyo indho-laawayaasha alaabooyinka fikirka iyo dadaalka; Soomaliya oo ka soo jeeda meesha uu ku jiro Nabiga ayaa lagu arkay dhaqdhaqaaqa socdaalka safarka, qiyaasay heerka xawaaraha iyo safarka safarka, waxaa lagu xisaabiyay waqtiga ay muuqaal ahaan ku sugan yihiin meel walba oo ay joogaan taariikhdooda, waana ogaa asal ahaan, asalka oo dhammaadkeeduna wuxuu ahaa mid amiirradii Isxaaq, oo mid walbaba wuxuu haysto oo dhan weliba kaamil ha la wada ciqaabay.
Addoonkii oo ahaa in uu ku dhaqaaqay in uu ku dhaqaaqo tallaabo xoog leh ma arki karin "hooyada naxariista leh ee raxmadda", sidaa darteed wuxuu caabuday shay uu arki karo oo loo sheegay in uu yahay mid muqaddas ah: image image dhagax ah, kaas oo uu ku shubi lahaa oo qadhaadhkeedana laydinkuma yeedhiyo, ee u naxariisto. Isagoo ka warramay xajka iyo dhibaatada, laakiin isagoo garanaya Isis ma ahan mid ka fiican addoonta xanuun, quruxda, addoonto raaxo ah, wuxuu ka codsaday calaamadda Isis iyada oo loo marayo calaamadaha ubaxyada iyo macbadyada, waxaanay ka codsanayaan Isis in uu sii wado deeqda uu qofku ku riyaaqay. Dhaqdhaqaaqa jidhka dhererka ah, maadada astronomer-ka waxay arki doontaa sharciyada iyo habka qorraxda. Intaa waxa uu akhrin lahaa sharciga iyo taariikhda abuurista, ilaalinta iyo burburinta: waxay la xiriiri lahaayeen fikradaha iyo niyadda bini-aadmiga oo akhriya qadarinta jibbaarada sida ku cad hawshooda ragga. In la arko wada noolaanshihii oo dhan tallaabo aan sal iyo raad lahayn, sharciga jahawareerka iyo xaqiiqada muuqaalka muuqaalka, asaliyihii sumcadda ahaa ee loo yaqaan 'Isis' ayaa loo yaqaan sharciyada Isis ee maamulayaasha dalka, kuwaas oo markaa u hoggaansamey sharciyadan sida ay dabiiciga iyo sirdoonka. Iyadoo la eegayo tallaabada aan la qiyaasi karin ee sharciga iyo isafgaradka iyada oo la adeegsanayo dhammaan noocyada jira, maadada astronomer-takfire ayaa qadarinaysa sharciga, waxay ku dhaqmeen si waafaqsan iyaga oo u adeegsanaya xaqiiqda dhabta ah ee foomamka soo saaray Isis aan muuqan.
Addoomada xanuunka iyo raaxada waxay ogtahay Isis oo keliya qaabka iyo dareenka; kuwa caqliga leh waxay ogaadeen Isis inuu yahay wax soo saaraha joogtada ah iyo taageeraha wax walba.
Bini'aadamku wax yar ayuu isbeddelay tan iyo maalinta Khem. Rabitaanada, hamigooda iyo rabitaankoodu way ka duwan yihiin shahaadada oo keliya, maaha nooc. Mabaadii'da aqoonta waxay la mid tahay sidii hore. Hababka iyo qaababka kali ah ayaa isbeddelay. Naftii ka qaybgashay nolosha Masar waxay mar kale soo gali kartaa arena wakhtiyo casri ah. Isis ma uusan ku dhiman Masar xitaa iyada oo aaney jirin. Cibaadadu waxay u jirtaa ilaa maanta sidii ay markaas sameeyeen.
Dhuxulada cidhiidhiga ah ee caloosha dhulka ayaa u ducaynaya sawirka Maryan si uu uga sii daayo silsiladaha shaqada. Farshaxanka farxada leh ee raaxeysiga ah ayaa u duceynaya sii wadida raaxaysi. Ninkii caqliga ahaa wuxuu arkaa sharciga iyo kala dambaynta caddaalad darrada iyo jahawareerka, wuxuuna u shaqeeyaa si waafaqsan xaqiiqada keliya ee uu ogaado in uu u arko in uu u muuqdo dhamaanba muuqaalkiisa. Isis waa sida dhabta ah-sida maalmaha Khem. Maanta Isis ayaa cibaadaysanaya iyada oo codadkeedu yahay idol, oo ku habboon, ama dhabta, sida ay markaas ahayd. Magaca iyo qaabka diimaha ayaa isbedelay laakiin cibaadada iyo diinta ayaa isku mid ah. Dadku way arkeen oo caabudeen Isis sida ay u dhaqmaan dabeecadooda, jilayaasha iyo heerarka horumarka. Sida cibaadada Isis waxay ahayd sida ay sir u tahay dadka reer Masar, sidaas awgeed hadda waxay ku xiran tahay sirdoonka dadkeenna. Laakiin xitaa ka hor intaan soo ifbaxaynin mabaadi'deena ilaa heerkee u dhiganta sharafta iyo xigmadka ee Masar, dadkeennu waxay noqdeen kuwo qallafsan oo cibaadadooda ah ee Isis sida ay ahaayeen Masriyiintii oo ka soo go'day Masar. Marka laga soo tago dareenka dareenka, awood-awood, siyaasadeed, iyo wadaadku waxay ka xoroobayaan dadka aqoonta Isis maalinle ah sidii xitaa maalmihii Masar.
Isaga oo ogaanaya Isis waa inuu ka gudbo ilxidhka ilbiriqsiyada ee Isisiga; laakiin dadka dhamaantood Isis waxaa loo yaqaanaa sida ay tahay, si xoog leh ayaa loo daadiyey oo si qoto dheer loo qariyey.
Balse yaa Isis ah iyo waxa ilbiriinteedu? Cibaadada Masaanka ee Isis ayaa sharxi kara. Sheekada ayaa sidaas ku socota:
Isis, hooyadeena niyad jabsan, dabiiciga ah, meel bannaan, waxay kor u qaadeysaa muuqaalkeeda quruxda leh iyada oo loo marayo dhammaan waxyaabahaa loo yeeri karo jiritaanka iyo bixinta. Isis wuxuu ku bilaabay adduunyadeedii aan qallafsaneyn in ay ku duuban tahay iyo sida ay udhaqaaqday waxay tuurtay muraayadda ilxadeeda, oo aad u jilicsan marka loo iftiimiyo iftiinka qorraxda, oo ku saabsan ilaahyada. Ku sii socoshada adduunka ugu culus, ilbaxnimadu waxay ahayd mid la mid ah tan iyo markii ay gaartay oo ay ka furtay dadka iyo dunida.
Dabadeedna, dhammaantiisba way arkeen oo waxay arkeen qayb ka mid ah ilxad ay ku jireen, quruxda Isis iyada oo loo marayo ilxadkeeda. Markaas waxaa laga helay jacaylka da'da iyo dhimashada, lamaanaha daa'imka ah iyo kuwa aan is dhaafsanayn, kuwaas oo ilaahyada ugu sarreeya ay ku foorarsadaan cibaadada.
Mortals ayaa markaa isku dayay in ay dhigtaan waligood daa'iman iyagoo qaabeynaya inay ku hayaan oo ay dareemaan ilbiriqsigooda. Tani waxay keentay ilmagaleenka in loo kala qaybiyo; oo ku taal xagga woqooyi, naag kaleeto. Goobta jacaylka iyo dhimashadaba, ilmagaleenka ayaa la ogaaday in dadka ay joogaan jaahilnimada iyo dhimashada.
Dabadeedna jaahilnimadu waxay ku dul tuureen mugdi madow iyo khafiif ah oo ku saabsan ilmagaleenka aan la jidh-doonin oo aan jebin jacaylka ay ku doonayaan inay ku dhex galaan ilxadda. Dhimashadu waxay ahayd cabsi gudniinka gudcur la dhigay, oo xataa ahaa kuwii gobta ahaa, iyo taliyayaashii waddanka oo dhammu waxay ku dheceen inay dhiig daadiyaan. Sidaa darteed jacaylka iyo dhimashadaba, hadda waa ka qarsoonaa dadka iyagoo jaahil ah iyo dhimasho. Cago-jugleynta ayaa muujinaysa aragtida iyo dhimashada waxay cabsi gelinaysaa, taas oo ka hortagaysa helitaanka jacaylka iyo dhimashada. Oo wuxuu ka cabsaday inuu calool xumaado oo gacmihiisii ​​ka dhawaajiyo oo dabadeedna wuu qallafsanaa.
Isis weli wuxuu taagan yahay ilxidhka illaa illaa aragtida ilmaaheeda ay awood u leedahay inay ku dhufato oo ay aragto quruxdeeda aan nasiib u lahayn. Jacaylku wali wuu joogaa si loo nadiifiyo oo looga nadiifiyo maskaxaha mugdiga mugdiga iyo nabarrada dabeecadda iyo cidhiidhiga, iyo si loo muujiyo wada noolaanshaha dhammaan kuwaas oo dhan. Dhimashadu waxay u tahay qofka aan arkeynin, laakiin wuxuu u egyahay ilbaxnimo Isis, iyo wixii ka baxsan. Markaa helitaanka jacaylku wuxuu dareensan yahay qof walba, inuu noqdo qof difaac ah, oo kafaala qaaday, iyo badbaadiyaha ama walaalkiis, Isis iyo caruurteeda oo dhan.
Isis, oo saafi ah oo aan nadiif ahayn, waa walxaha dabiiciga ah ee aan caadiga ahayn, meel bannaan oo aan lahayn. Jinsigu waa ilxidhka Isis kaasoo siinaya aragti waxtar leh inkasta oo ay daruuri u tahay aragtida waxyeellada. Laga soo bilaabo fikradaha iyo camalka ragga iyo beenta adduunka oo la duubay, kaas oo Isis (dabeecada, walaxda, meel bannaan) uu ku hayo naftiisa, aduunkeenna waxaa lagu soo saari jiray sida sharciga iyo sababaha. Hooyo Isis ayaa bilaabay dhaqdhaqaaqeeda iyada oo aan ka muuqanin dhulka aan la arki karin, waxaana si tartiib ah loo keenay in ay noqotey wax kasta oo ka qayb qaatay shuruudihii hore; markaa dunideenu waxay ka samaysmeen meel aan la arki karin sida daruur daruuri ah oo laga soo qaaday samada daruuriga ah. Markii ugu horeysay ee dunidu waxay ahaayeen kuwo iftiin iyo muuqaal ah; si tartiib tartiib ah ayey ugu garteen jirkooda iyo foomamka illaa ay ugu dambeyntii yihiin sida aan isu aragno inaan maanta noqonno. Hase yeeshee, maalmihii hore, ilaahyada waxay ku socdeen dhulka ragga, raguna waxay ahaayeen ilaahyo. Ma ayan aqoonin jinsiga sidaan u sameyneyno, sababtoo ah si aad ah uma aysan dhicin ilxadda, laakiin waxay si tartiib tartiib ah uga warqabeen sida ay ciidamadu u kiciyeen oo ay u noqdeen kuwo aad u kacsan. Aragtida dadka nool ee aan galmadu jirin way ka daalan yihiin inta badan; waxay arki karaan ujeedada sharciga ah waxayna u shaqeyn jireen sida waafaqsan; laakiin sida ay u fiirsadeen wakhti badan oo lala wareegay waxyaalihii dunida, iyo sida ay sharciga waafaqsan yihiin, indhahoodu waxay ku xidhnayd jiilka hoose ee ruuxiga ah, oo si buuxda u furay caalamka dibadda; waxay ku sameeyeen jinsi waxayna noqdeen kuwa caadiga ah ee aynu maanta joogno.
Waqtiga qadiimiga ah ee jirkeena waxaa soo saarey iyada oo ku dhaqmi doonta sharciga dabiiciga ah. Maanta jirkeena waxaa lagu abuuraa rabitaan, waxaana inta badan keena jiritaan oo ka soo horjeeda rajada kuwa soo saaro. Waxaanu ku jirnaa jirkeena dhammaadka hoose ee qulqulatada qulqulatada iyo kor u kaca ee wareegga kobaca. Maanta waxaan bilaabi karnaa fuulitaanka, oo ka soo jeeda qulqulka guud ee ugu culus adoo ku dhejinaya daboolka Isis, oo xitaa dhoobo caleenta gebi ahaanba, kor u kaca, oo fiiri Isis iyadoonu ku jirin qaababka aan ku koobnayn oo aynu ha uuraysto inay noqoto
Sida uu dhigayo sharciyada ay dunidu u xukuntay dhammaan noocyada adduunka ee adduunka ku yimaada, sida ku xusan xakamaynta Isis. Waxay u gashaa ilxidhka ay tahay inay xirtaan inta ay joogaan halkaan. Wajiga Isis, jinsi, waa la dhuftey, oo wuxuu ku dhuftay by taarikhda, kuwaas oo waayadii hore loogu yeeray gabdhaha loo baahan yahay.
Wajiga Isis ayaa ku baahsan adduunka oo idil, laakiin adduunkeena waxaa matala labadii lamaane ee jinsiga ka soo horjeeda. Jinsigu waa arin aan la arki karin oo dhar ah oo dhar u eg oo aan ciriiri ahayn oo la galiyo si ay u helaan jimicsiga jirka iyo in ay ka qayb qaataan arrimaha nolosha. Waa ficil ka mid ah iska horimaadyada, ruuxa iyo arrinta sida boodhka iyo woofka, in ilmagaleenka si tartiib tartiib ah u noqdo dharka muuqda ee nafta; laakiin warp and woof waa sida qalabka iyo walxaha kaas oo si joogto ah isbeddelay oo diyaariyay ficil maskaxda ku saabsan rabitaan. Fikraddu waa natiijada ficilka maskaxda ee ku aaddan rabitaanka iyo fikirka (♐︎) Xaaladda nololeed ee nolosha (♌︎) waxaa lagu hagaa qaab (♍︎).
Dhiigyadu waxay qaataan godka Isis sababtoo ah iyada oo aan la buuxin karin wareegga safarkooda aduunka oo dhan; laakiin marka aad qaadatay daboolka, waxay noqdaan kuwo aad u fara badan oo ku jira xudduudkooda oo aanay arki karin ujeedada ay udoodhka ah, wax kasta oo aan ahayn kuwa bulsho ama dareen farxad leh oo ay bixiso.
Nafta lafteedu ma laha jinsi; laakiin marka aad xiraneyso ilmagaleenka waxay u muuqataa galmo. Mid ka mid ah wejiga ayaa u muuqda sida nin, dhinaca kale ee haweeneyda, iyo isdhexgalka iyo is-afgaradka ilxidhka oo dhan wuxuu ka hadlaa awoodaha ku dhex jira. Kadibna waxaa abuuray oo horumariyay dareenka ilbaxnimada.
Dareenka jinsiga ayaa ah dareenka shucuurta bini aadamka oo ku fidiya marxalad kasta oo nolosha aadanaha ah, taas oo ka mid ah dareenka hooseeya, dareenka miyir-qabka, iyo iyadoo la adeegsanayo dhammaan gabayada gabayada ah ee u adeega dhaqanka aadanaha. Dareenka iyo akhlaaqda ilbaxnimada Isis waxaa soo bandhigay nasiib daro kufsi ah kaas oo iibsada xaaskiisa ama kor u qaada tirada iyaga oo leh xuquuqda qabashada; by falalka chivalry; iyadoo la aaminsan yahay in jinsi kasta loo abuuray kan kale ee Ilaah; iyo kuwa u fasirta ujeedada jinsiga ah sida ku cad dhammaan fekerka cajiibka ah. Dhammaanba waa isku dhafan oo kor u qaadaya qiimaha ama wax-qabadka jinsi kasta oo kale. Laakiin caqiidada u muuqata in ay tahay mid aad u farxad badan leh ee cirfiidka badani waa maskaxda caqliga nafta laba-laabka ah, oo lagu soo bandhigo qaabab badan oo kala duwan sida waafaqsan nooca iyo rabitaanka rumaystaha. Si fudud u dheji waa tan, in nin ama naagtu ay kala badh uun yihiin. Si loo dhamaystiro oo loo dhameeyo joogitaanka, badhka kalena waa loo baahan yahay waana in laga helaa mid ka mid ah galmada ka soo horjeeda. In labadan qeybood loo kala saaro oo kaliya si isku mid ah, oo waa inay is-wareejiyaan wareegyada wakhtiga illaa ay ka soo baxaan oo ay midoobaan isla markaana ay noqdaan kuwo ku haboon. Dhibaatadu waa, si kastaba ha ahaatee, fikradan cajiibka ah waxaa loo isticmaalaa marmarsiiyo loogu talagalay in la iloobo xeerka anshaxa ee aasaasiga ah iyo waajibaadka dabiiciga ah.
Jinsiga labadaba waa mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee horumarka nafta, iyo doodda dareenka maskaxda ee naftiisa ku baabi'iso marka si xasiloon loo eego sababaha qofka aan helin jilicsanaanta ama qeyb kale oo aan ahayn oo aad u ba'an oo ka cabanaya dabeecada jinniga.
Ereyga jinsigu wuxuu leeyahay kumanaan kaladuwan oo kala duwan sida kuwa badan oo maqla. Qof kastaa wuxuu rafcaan u yahay sida ay u kala qaybsamaan jidhkiisa, waxbarashadiisa, iyo maskaxdiisa. Midba waxa weeye macnaheedu yahay in rabitaanka jidhka iyo rabitaanka xayawaanku ay u maleynayaan, mid kale oo dareen badan leh oo naxariis iyo jaceyl ah sida muujinaysa xushmeynta ninka iyo xaaskiisa iyo masuuliyadaha nolosha.
Fikradda jinsiga waxaa lagu qabtaa diinta, halkaas oo qofku u malaynayo inuu weligiis joogi doono, oo ah Ilaah oo dhan iyo Ilaaha Qaadirka ah, sida aabaha iyo abuuraha wax walba- iyo hooyada naxariista leh ee naxariista, oo ka codsanaya inuu u duceeyo isaga Ilaah, Aabbaha ama Wiilka. Sidaa daraadeed fikradda jinsiga ayaa maskaxda ku haysa maskaxda aadanaha, ma aha oo kaliya sida xukunka dhulka dunidan, laakiin sida adduunka oo dhan iyo xitaa ka sarreeya jannada, meesha aan la heli karin. Laakiin haddii mid ka mid ah jinsiga uur-jiifsan yahay dareenka ugu hooseeya ama dareenka ugu sareeya, ilmagaleenka Isis waa inuu indhodheer ku eegaa indhacade. Dadku waxay mar walba tarjunayaan wixii ka baxsan ilxidhka dhinaca bidix ee ay eegaan.
Ma aha in la yaabiyo marka in maskaxda aadanaha ay aad u soo jiitamaan fikirka jinsiga. Waxay qaadatay da 'wayn si ay ugu habboonaato qaababka ay ku habboon tahay, iyo maskaxda ku qasabtay inay wax ka qabato isbeddelada kala duwan ee noocyada arimaha waa in ay khasab ku noqdaan.
Dhanka kale, jinsiga, ilxidhka Isis, ayaa si tartiib tartiib ah udhacday iyo agagaarkiisa iyo qaababka oo dhan, iyo rabitaanka jinsiga ee qaabkoodu ka adkaaday oo wali waa uu guuleeystaa. Iyadoo maskaxda ay si buuxda ugu dheceen jinsi, araggiisa waxay noqotay mid midab leh. Waxay aragtay nafteeda iyo kuwa kale iyada oo loo marayo ilxidhka, dhammaan fikradda maskaxduna wali way socotaa, ilbiriqsiga ilbaxeedkuna wuxuu baran doonaa kala-takoorka u dhexeeya dharka iyo ilxidhka.
Sidaa daraadeed, wax kastoo dhameeya nin, wuxuu ku daboolan yahay ilxidhka Isis.
Caanaha waxaa loo isticmaalaa ujeedooyin badan waxaana inta badan lala xiriiriyaa haweenka. Dabeecadda waxaa looga hadlaa sida haweeneyda, iyo qaabka iyo falka uu matalayo haweeney. Dabeecadu waligeed maaha wax qarinaya nafta. Xijaabka dumarka waxaa loo isticmaalaa sida quruxda qurxinta, xayawaanka dharka ah, maqaarka barooriga ah iyo si looga ilaaliyo dabaylaha sare iyo boodhka. Dabeecadda iyo sidoo kale haweenku waxay difaacaan, qariyaan oo waxay sameeyaan muuqaal soo jiidasho leh khiyaaliga.
Taariikhda dhoofinta iyo xidhashada iliga Isis ilaa wakhtigan xaadirka ah, iyo sidoo kale waxsii sheegista mustaqbalkeeda, waxaa lagu soo koobay oo lagu soo bandhigay nolosha bini'aadanimada laga bilaabo dhalashada ilaa caqligeeda iyo da 'weyn. Marka dhalashada ilmaha waxaa waalid ahaan u daryeela waalidka; wax fikrad ah iyo daryeel ma laha. Jidhka jilicsan ee jilicsan ayaa si tartiib ah u qaadaya foomka qeexan. Jidhkoodu wuxuu noqdaa mid adag, lafihiisuna way xoog badan yihiin, waxayna bartaan isticmaalka dareenkiisa iyo addimada; weli ma bartay isticmaalka iyo ujeedka jinsigiisa, ilmagaleenka kaas oo la duudduubay. Tani waxay u taagan tahay qaababka hore ee nolosha; marxaladdan xilligaasi wax fikrad ah malaha Isis, inkasta oo ay ku dhex noolyihiin. Jidhkoodu waxay ahaayeen kuwo aad u sarreeya noloshooda, waxay ka jawaabeen oo ay u dhaqmeen xubno iyo ciidammada si dabiici ah iyo farxad leh marka carruurtu ku qoslaan oo ciyaaraan qorraxda. Carruurnimadu wax fikrad ah uma lahan daboolka uu xiran yahay, laakiin aan weli miyir qabin. Tani waa da'da dahabiga ah ee carruurta sida ay u ahayd bini-aadannimada. Dabadeed ilmuhu wuxuu aadaa dugsiga oo wuxuu isu diyaarinayaa shaqada uu ku leeyahay adduunka; Jidhkeedu wuxuu koraa oo kobciyaa dhalinyarada, illaa indhaheeda la furo-oo ay u muuqato oo ay noqoto mid miyir qabo ilxidhka Isis. Dabadeed dunidu way isbeddeshaa. Qorraxdu waxay lumisaa hunqaacadeeda, shimbiruhu waxay u egtahay inay wax walba ku dhacaan, daruuraha ayaa soo ururiya halka horeba aan hore loo arkin, caajisku waxay u muuqdaan in ay dunidaan. Dhallinyaradu waxay soo heleen jinsigooda oo waxay u muuqdaan inay jiran yihiin kuwa xiran. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in qulqul cusub oo maskaxeed uu soo galo qaabkaas oo uu kudhaca dareenkiisa, oo ah sida laamaha geedaha aqoonta.
Cibaadada hore ee Aadan iyo Xaawo ee beerta Ceeden iyo khibraddoodii abeesiga ayaa mar kale soo wareegtay, oo qadhaadhka "fallaaraha nin" ayaa mar kale soo maray. Laakiin dareenka dembiga loo yaqaano wuxuu noqonayaa dareen farxad leh; daruurta qulqulaya ee u muuqda in ay adduunkoodii ku guuleysteen waxay si dhakhso ah u siinayaan hababka casriga ah iyo midabada midabada leh. Dareenka ilmagaleenka ayaa u muuqda; miiqyada cawliga ah waxay u rogaan heeso jacayl; aayadaha waa la aqriyaa; gabaygu wuxuu ka kooban yahay qarsoodiga ilmagaleenka. Ilaalinta waa la aqbalaa oo la duubaa-sida muraayad jilicsan oo ka mid ah jaantuska, jilicsanaanta dareenka, ujeedada roonaanta.
Carruurnimada jinsiga ayaa ku soo degtay miisaankii hore ee mas'uuliyadda kaas oo tartankaasi ka soo wareegay tan iyo markii uu jiray. In kastoo inta badan si tartiib ah, si tartiib tartiib ah, iyo si aan caadi ahayn, weli, si kastaba ha ahaatee, masuuliyada ilxidhka ayaa la qaadaa. Dumarka bani-aadminnimada maanta waa sida ragga iyo dumarka-caruurta. Waxay dunida u yimaadaan, noolaadaan, guursadaan, oo ay noloshooda ku noolaadaan iyaga oo aan ogeyn sababta ay u imaanayaan ama ay u socdaan, ama ujeedada ay u joogaan; Noloshu waa beer farxad leh, hudheello gaaban, ama jimicsi dhalinyaro ah oo ay bartaan waxoogaa yar oo waqti wanaagsan leh oo aan lahayn fikrado badan oo mustaqbalka ah, oo dhan sida ay u socdaan iyo jawigooda. Laakiin waxaa jira xubno ka mid ah qoyska aadanaha oo arkaya xaqiiqda dhabta ah ee nolosha. Waxay dareemayaan masuuliyad, waxay qabteen ujeedo, waxayna ku dadaalaan inay si dheeraad ah u arkaan ayna u shaqeeyaan si waafaqsan.
Ninka, ka dib markii uu ku noolaa iligii ugu horeeyay ee uu ninnimadiisa, isagoo u maleynaya daryeelka iyo mas'uuliyadaha nolosha qoyska, isagoo ku hawlan shaqadiisa noloshiisa, kana qayb qaatay arrimaha bulshada, isagoo adeegsanaya adeegyadiisa markii uu rabo, ugu dambeyntiina waxaa jira ujeedo qarsoodi ah oo ka shaqeynaya gudaha iyo ilxidhka uu xiran yahay. Waxa uu inta badan isku dayi karaa in uu qabsado glimpses ee joogitaanka iyo qarsoodiga uu dareemo. Iyadoo da 'sii kordhaysa, caqligu wuxuu noqon doonaa mid xoog badan, aragtiina wuxuu caddeeynayaa, in dabku wali ku dhex seexanayo, oo uusan dab qabadsiinin, iyo bixinta in dabkani aanu smoolder, keenin qiiqa si uu u koro oo uu daruuro u muujiyo maskaxda.
Maadaama dabka damaciisu yahay mid la xakameynayo, ilxidhku weli waa mid cakiran, dharbaaxadu waxay noqotaa nadiif ah oo la nadiifiyaa by ficilka maskaxda ka fikiraya dunida ugu fiican. Maskaxdu maaha xaddidaadda ilmagaleenka. Fikraddiisu waa xor ka ah boodhka iyo woofka ilmagaleenka oo waxay bartaa in ay u fikiraan waxyaabaha sida ay yihiin halkii ay ka muuqan lahaayeen qaabka iyo dabacsanaanta ilmagaleenka. Sidaas awgeed da 'weyn waxay u roonaan kartaa xikmadda halkii ay ku soo boodi lahayd. Kadib, sida caqligu u noqdo mid xoog badan oo ilaahnimadiisa ka muuqata, dharka ilbaxnimo waxaa laga yaabaa in la gashado si loo yiraahdo si qarsoodi ah loo dhigo. Marka ilmo kale dhalashada mar kale la qaato, aragti ayaa noqon karta mid xoogan oo awooda weyn ku filan bilowga nolosha, si loo isticmaalo ciidammada lagu hayo ilxad si ay ujeedada ay ugu dambeyntii u socoto, dhimashaduna waa laga gudbi karaa.
Wajiga Isis, jinsi, waxay u keentaa dadka oo dhan murugadooda, silica iyo rajada. Iyada oo ilmagaleenka Isis dhalanayo, cudur, iyo dhimasho. Ilaalinta Isis waxay nagu haysaa jaahilnimo, jilicsan, nacayb, caro iyo cabsi. Iyada oo xirashada ilxidhadu soo jiidasho rabto, fantasies, Munaafaqnimada, khiyaanada iyo rajiimka-o'----------hanjabaadda.
Miyay tahay, markaa, jinsiga waa la diidi karaa, la ridi karaa, ama xakameynayaa si loo jeexo ilbaxnimada oo naga jaray dunidii aqoonta? Si aad u diidid, ka fogaato ama cadaadiso jinsiga qofku waa inuu ka fogaadaa habka ugu badan ee koritaanka looga baxo. Xaqiiqada ah in aan ku xirnahay ilxadda waa inay naga horjoogsataa in aan diidno; in la joojiyo jinsiga waxay noqon kartaa diidmada waajibaadka iyo masuuliyada qofka, in la xakameeyo jinsiga midkood inuu isku dayo been abuur iyo in la baabi'iyo hababka barashada xigmadda ee casharrada waajibaadka iyo masuuliyadaha jinsiga, iyo fahamka foomamka Isis muujinaya annaga oo sawirada ku saabsan ilxidhka iyo casharrada sheyga ee nolosha.
Aqoonsiga xirashada ilmagaleenka, laakiin ha ka dhigin xirashada sheyga nolosha. Ku kalsoonow masuuliyada ilbiriqsiga, laakiin ha ku dhicin meshes si ay u lumiso aragtida ujeedada oo ku dhajiso gabayada ilmagaleenka. Samee waajibaadka ilbaxnimada, ilbaxnimo sida qalab wax qabad ah, laakiin aan loo adeegsan qalabka iyo natiijada waxqabadka. Daaha waa la jeexi karaa, waa in la gashado. Iyadoo si joogto ah u eegaysa iyada oo ay sii socoto oo ay u ogolaato midoobidda macaamiisha la yaqaan.
Cirbadku wuxuu ilaaliyaa oo ka gooyaa maskaxda qofka saamaynta ku leh iyo shirkadaha kuwaas oo noqon doona mid aad u waxyeello u leh jaahilnimada hadda jirta ee awoodaha ilbaxnimada. Maskaxda jinsiga ayaa maskaxda ka ilaalisa in uu arko oo uu la soo xiriiro awoodaha aan la arki karin iyo ururada ka soo horjeeda, iyo sida, shimbiraha habeenkii, waxaa soo jiidanaya iftiinka uu maskaxdiisa ku dhexjirto maskaxdooda. Ilaalinta jinsiga sidoo kale waa xarun iyo goob lagu ciyaaro ee xoogga dabiiciga ah. Iyadoo loo marayo wareegga darajooyinka dhibcaha iyada oo loo marayo boqortooyooyinka kala duwan ayaa la qaadayaa. Iyada oo daboolka jinsiga, naftu waxay geli kartaa dabeecadda dabiiciga ah, fiirso hawlgalkeeda, noqoshada barashada geedi-socodka is-beddelidda iyo isudheellada boqortooyada ilaa boqortooyo.
Waxaa jira todobo marxaladood oo horumarinta aadanaha iyada oo loo marayo ilxidhka Isis. Afartan ayaa la gudubtay, waxaan ku jirnaa kaalinta shanaad, labana waa ay imanayaan. Toddoba marxaladood waa: aan waxba galabsan, kicin, xulasho, iskutallaabta, iskutalaabinta, daahirinta iyo dhammaystirka. Toddobadan marxaladood oo dhan, nafaha oo dhan waa in ay dhaafaan kuwa aan ka helin sii deynta wareegga reincarnations. Kuwani waa toddoba marxaladood oo ay tahay in ay la sameeyaan caalamyada la arko, waxay calaamad u yihiin kacdoonka naftu inay wax ku bartaan si ay u helaan waayo-aragnimo, ka adkaadeen, wax baraan, iyo inay xor ka noqdaan arrinta marka ay dhammaystiraan safarkooda evolution.
Si aad u ogaatid macnaha astaamaha calaamadaha maskaxda, waxay noqon doontaa caawimaad faham ah marxaladaha ama darajooyinka la sheegay, si loo ogaado sida toddobada loo isticmaalayo oo loo fahmo xodiga, iyo sidoo kale inay ogaadaan calaamadaha kuwa ay yihiin kaas oo ilxidhka Isis ku dhaqmo. In Tirada 7, maskaxda waxaa lagu muujiyay labadoodaba calaamad u ah amarkooda caadiga ah. Wajiga Isis wuxuu ku bilaabmayaa calaamada Giniini (︎︎) ee adduunka aan la iloobin wuxuuna hoos ugu dhacaa calaamad aan weyneyn iyada oo loo marayo calaamada ugu horeysa ee caalamka la arko, kansarka (♋︎), neefta, ugu horeysay ee loo soo maro adduunka ruuxiga ah, iyada oo loo marayo arrin la xidhiidha calaamadda calaamadda, (♌︎), nolosha. Ka noqoshada culeyska iyo culeyska ka soo jeeda caalamka cimriga, oo calaamad u ah calaamad muujinaysa qaabka (♍︎), waxay ugu dambeyntii gaareysaa heerka ugu hooseeya calaamadda libra (♎︎), jinsi. Dabadeedna waxay u muuqataa inay kor u kacday qulqul-darradeedii, taasoo u dhiganta xarriiqda hooseysa, iyada oo loo marayo calaamadda scorpio (♏︎), rabitaan; sagittary (♐︎), fikirka; xornimo (♑︎), shakhsi ahaan; waxaa jira dhammaadka dhammaan dadaal shaqsiyadeed iyo waajibaad shaqsiyeed. Mar labaad u gudubka kuwa aan uxaqiijin waxa ay ku dhammaaneysaa marxalad isku mid ah, laakiin dhinaca dambe ee diyaaradda oo laga bilaabo calaamadda aquarius (♒︎), nafta.
♈︎ ♉︎ 戴︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎
Ilaalinta Isis waxaa la daadiyey meel sare iyo ruux ahaan iyo sidoo kale aduunka iyo dareenka hooseeya. Waxay ka bilaabantaa calaamadda ginigi (shaki), walaxda, walxaha asaasiga ah, oo si adag u xiran, oo hoos u riixaya. Isis on diyaaradeeda sare ma laha indhaha dadku arki karaan, indhaha mugdi ah marnaba ma dhejin karo dhulka ka baxsan muuqaalka; laakiin marka qof naftiisa u gudbo toddobo marxaladood oo dhan, markaa, marka laga eego aragtida aquarius, naftu, waxay u aragtaa Isis sida ay ku jirto maraakiibta, xakameyn, daahir, aan waxba galabsan.
Cimilada toddobada marxaladood ayaa lagu muujiyey calaamadaha. Kansarka (♋︎), neefta, waa masraxaas ama shahaadada oo dhammaanba nafsad ahaaneed in ay ka qayb qaataan ama ay ku yeeshaan aduunka aduunka. waa adduunka oo aan la taaban Karin ama khiyaano, marxaladda aan waxba galabsan. Halkaa waxaa ku jira mowqifka ruuxiga ah iyo kan cibaadada, oo u hoggaansamaya shuruuc caalami ah oo uu ka soo baxo oo ka soo baxo naftiisa, nolosha, marxaladda xiga ama heerka, leo (sidaas), iyo sidoo kale marinta ilxidhka, arrin ruuxeed wuxuu isku dhejiyaa qaab.
Noloshu waa arrin ku salaysan jinsiga, waa marxaladda hore ee jinsiga. Maqnaanshaha marxaladda ugu weyn ee noloshu waa laba-jinsi. Calaamadaha soo socda, miro (♍︎), foomka, waxay galaan marxaladda xulashada, iyo meydadka labadooduba hadda waxay kala qaybsan yihiin jinsigooda. Marxaladdan qaabka jireed ee bini'aadamka ayaa la qaadaa, iyo maskax-wareerka. Kadibna wuxuu bilaabmaa marxaladda ama darajada sare ee iskutallaabta, taas oo eey ka gudubto dhammaan murugada ay badbaadiyeen diin walba oo la sheegay in ay ku dhamaatay. Tani waxay calaamad u tahay isu-dheellitirnaanta iyo isu-dheellitirka ay ka barto dhammaan casharrada nolosha jirka: waxaa lagu dhejiyaa jinsi ahaan waxa uu bartaa dhammaan casharrada jinsigu baran karo. Dhamaan xabsiyada oo dhan waxay bartaa sida ay u fuliyaan waajibaadka dhammaan xiriirka qoyska waana in ay weli kudhicaan jirka jinsiga, ka gudba dhammaan darajooyinka kale. Jidhka jidhka oo keliya ayaa bartay, laakiin aadanaha sida jinsiyad ayaa ku jira calaamada soo socota, diiqad (♏︎), rabitaan, iyo heerka faafinta. Calaamaddan oo kale ego waa in uu u gudbiyaa rabitaanka nacfiga galmada (♎︎), ujeedooyinka sare ee nolosha. Tani waa calaamadda iyo darajada ay tahay in dhammaan fara-gelinta iyo rabshadaha waa in la faafiyo, ka hor inta aanay ka helin diyaaradahooda qaababka iyo awoodaha gudaha ee gudaha iyo ka dambeeya muuqaalka muuqaalka.
Darajada xiga waa middaas oo ah nooca arooska lagu nadiifiyo. Tani waxaa lagu sameeyaa fikirka, (♐︎). Dabadeedna, dareenka iyo awoodda nolosha ayaa la arkaa oo hoggaamiyaa fikradda, iyada oo loo marayo ujeeddo loo maro marxaladda kama dambaysta ah ee aadanaha, halkaasoo bini'aadanku noqdaan kuwo aan dhimanayn. Heerka kama dambaysta ah iyo kan toddobaad waa kan ugu sarreeya, xadhigga xayeysiiska (♑︎), shakhsiga; oo ka soo hor jeedda dabiicadda iyo khiyaanada iyo daacadnimada oo dhan iyo hodantinimada badidiisa, iyo inay nadiifiyaan mooyaane fikirrada fikirrada oo dhan, iyo inay ogaadaan in ilaah kasta oo ay jiraan xigmaddiisu ay xagga wanwanaagsan tahay. Dhammaan isticmaalka iyo ujeedooyinka ilbidhiqsiga Isis ayaa markaa si cad loo arkaa, iyo caawimaadyada aan dhammaadka lahayn ee dhammaan kuwa weli wata jahwareerkooda ku jira qaybaha hoose ee ilxadda.
² Eeg Word The, Vol. 2, Lambar 2, "Galmo."